🥇 ▷ Samsung Galaxy A60 ayaa hadda ka muuqda muuqaal muujinaya faahfaahintiisa ✅
Samsung Galaxy A60 ayaa hadda ka muuqda muuqaal muujinaya faahfaahintiisa
Shalay waxaan kuu sheegnay astaamaha Galaxy A60, mid ka mid ah xarumaha dambe ee Samsung.
Hadana, nolosha isku-dheellitirka (ama ma aha), waxaan helnaa wixii noqon lahaa kan ugu horreeyay siin Shaandhaynta terminal-kan.
Sawirkaan waxaad ku arki kartaa qalabkan oo leh faahfaahin qaali ah, marka lagu daro adkeynta faahfaahinteeda.
Tani waxay noqon laheyd Samsung Galaxy A60
Shaashadda waxay yeelan doontaa faa iido weyn xagga hore waxayna ka faa’iideysan doontaa teknolojiyadda Infinity-U, taasi waa in la dhaho, a feejignaan Biyaha dhibic qaabeeya Feejignaantaas waxaa ku jira kamerad hore oo 32MP ah.
The bandhig lafteedu waa 6.7-inch Super AMOLED at Full HD + resolution. Sidoo kale, isla isla guddikaas akhristaha farta sawirka ayaa la gelin doonaa.
Dhinaca geeskiisa midig waxaad kaheleysaa mugga iyo furaha / furayaasha. Waxaa cajiib ah in Samsung uusan dhigin batoon u heellan Bixby… oo aan ugu yaraynayn marka la eego daadadkan.
Dacwaddiisa gadaasheeda ayaan lahaan doonnaa kamarad saddex-geesood ah oo leh qaab toosan. Dareenka ugu weyn wuxuu noqon doonaa 32MP, ka dib waxaa jiri doona 5MP kale iyo kan saddexaad 8MP. Waxaas oo dhan waxaa la socon doona toosh toos ah (LED flash).
Qeybta hoose waxaan ka mahadcelineynaa a isku xiraha Jack 3.5 mm aalada dhagaha, mikrofoonka weyn, USB isku xirka USB-nooca iyo cabirka hadalka.
Gudaha ayaa la dhigayaa 6 ama 8GB Ram iyo batari 4,500 mAh ah. Nasiib darrose batterigu wuxuu u badan yahay inuusan lahayn xukun degdeg ah, in kastoo aan rajeyneyno inuu ka soo horjeedku run yahay.
Intaa waxaa sii dheer, isha ayaa intaa ku dartay inaan haysan doono 128GB kaydinta gudaha iyo Android 9 Pie ee dharka.
Processor-ka wuxuu higsanayaa inuu noqdo a Qualcomm SM6150. Isku mid ayaa noqon doona sideed-SoC oo leh soo noqnoqoshada ugu badan ee 1.8GHz.
Miyaynu arki doonnaa bisha Abriil?
Haddii aan ku dhejiso xanta kale ee hore, tan Galaxy A60 markii ugu horeysay waxay ku soo baxday shaashad Infinity-O, taasi waa, oo leh god. Intaa waxaa dheer, the chipset Waxay ahayd isaga Exynos 9610.
Ka sokow intaas, labada ‘daad’ iyo isha hadda ayaa muujinaya taas 19-ka Abriil ee sanadkaan Kuuriyada Koofureed ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqi doonta aaladdaan. Waxaan ku arki doonnaa waqti lumis haddii xaqiiqadan gaarka ah ay ku dhammaato inay ahaato mid sax ah.